Waiting for School to reopen | Si Thu Diary 03 – China Report ASEAN
May 18, 2020 China Report ASEAN China-ASEAN Leaveacomment
Now it’s really hot in Myanmar as the average temperature ranges between 35 to 41 degrees. It’s easier to feel the heat if your house isn’t air-conditioned, specially since everyone is staying at home due to the coronavirus outbreak. But even with the air-conditioners, everybody can still feel the heat when the electricity goes off.
I’m missing Beijing now as the weather during this time of the year is really nice, you can go outside or stay at home. I’ve heard from the news and my friends who are living in China, that schools have reopened there. Currently in Myanmar, reopening schools is uncertain. There are many discussions going on regarding the effectiveness of online learning, as it’s been facing many challenges —from not having internet access in many regions in Myanmar, to the high cost of internet bills and the lack of learning materials for every student such as phone, tablet or laptop ­— Closing schools and transitioning to online learning has been quite challenging in Myanmar, and that’s why balancing the decision of whether to keep schools closed for safety or reopen them remainsadifficult question.
(Due to the rising outside temperature, phones and computers are overheating)
I have known about the online learning programs for Chinese kindergartners before reopening schools. Myanmar students who study in China and came back to Myanmar during the school break are now studying their school lessons online as their schools have already reopened.
Although the number of coronavirus cases worldwide has now topped4million and hundreds of thousands of people have lost their lives, we can say that Myanmar is still inagood shape as infected cases are less than 200 so far. If we can keep our numbers this low, schools might be able to reopen soon.
Now in Myanmar, both state run and private media share knowledge about COVID-19 daily and many actors and actresses as well as famous celebrities are also raising awareness over the pandemic. On different media platforms, there are many programs such as live video panel discussions, and talk shows.
Hoping to overcome this pandemic and reopen schools soon.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မှာဆိုရင် အပူချိန်က ၃၅ ဒီရီကနေ ၄၁ ဒီဂရီအထိ ရှိနေလို့ တော်တော်လေး ပူတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ stay home ကာလဆိုတော့ လူတိုင်းအိမ်မှာနေကြရတဲ့အခါ အဲကွန်းမရှိတဲ့အိမ်တွေဆို တော်တော်လေး သိသာပါတယ်။ အဲကွန်းရှိတာတောင်မှ မီးပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင် အပူဒဏ်ကို တော်တော်လေး ခံစားနေကြရပါတယ်။
ဘေဂျင်းမှာ ဒီအချိန်က နေလို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုမို့ သတိရမိပါတယ်။ သတင်းတွေဖတ်ရင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေဆီက ပြန်ကြားရင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်နေကြပြီဆိုတာလည်း သိရပါတယ်။ လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရေး၊ မဖွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒွိဟဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ အွန်လိုင်းကနေသင်ဖို့ ပြောပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရာတိုင်းကို အင်တာနက်ကွန်ရက်မဖြန့်ကျက်နိုင်သေးတဲ့ပြဿနာ၊ အင်တာနက်ဘေလ် စျေးကြီးတဲ့ ပြဿနာ၊ ကျောင်းသားတိုင်း ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့ပြဿနာ စတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ ရှိနေတုန်းပါပဲ။
(အခုဆို နေပူချိန်မြင့်လွန်းတော့ ကွန်ပျူတာတို့ ဖုန်းတို့သုံးရင် စက်တွေ တအားကို အပူချိန်တက်လာတဲ့ပြဿနာက ရှိနေပါတယ်။)
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတွေ ပြန်မဖွင့်ခင်က မူကြိုကျောင်းသားလေးတွေကိုတောင် အွန်လိုင်းကနေ သင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်မှာ ကျောင်းပိတ်တုန်း မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေဆိုလည်း အခုဆို တရုတ်မှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်လို့ အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတချို့မှာ ကပ်ရောဂါကြောင့် လူအသေအပျောက်များပြီး ကူးစက်သူတွေ သိန်းသန်းကျော် ရှိနေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိအခြေအနေအရ အခြေအနေကောင်းနေဆဲလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆက်ပြီး ထိန်းသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီး ကူးစက်သူမရှိတော့ဘဲ ကျောင်းတွေကိုလည်း ပုံမှန် ပြန်ဖွင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နေ့တိုင်း အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေမှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ အသိပေးနှိုးဆော်လျက်ရှိပြီး အနုပညာရှင်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပညာပေးတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။ မီဒီယာတွေမှာလည်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးခန်းတွေ၊ Talk show တွေ လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြီး မြန်မြန်ပြီးဆုံးပြီး ကျောင်းတွေ မြန်မြန်ပြန်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
Previous Post: Online Learning Amid Covid-19 Outbreak | Si Thu Diary 02
Next Post: The Online Shopping Boom Amid Pandemic | Si Thu Diary 04